Haweeney 93 sano Jir Ah oo Noqotay Duuliyaha Ugu Caalamisan Qaarada Yurub ‘SAWIRRO’ | Baahin Media
Haweeney 93 sano Jir Ah oo Noqotay Duuliyaha Ugu Caalamisan Qaarada Yurub ‘SAWIRRO’
“Duulimadyada caadiga ah wa caajis, waannecbahay,” ayay tiri, waxaa kale oo ay raacisay “England aad ayay u qurux badan tahay, weli ma ogaanin inay jiran goobo cagaar ah.”
“Waan maqli jiray duullimaadyadeeda balse halkan ma imaan, si an indaheyga ugu arko. Waxan rajeynaya in ay tahay duuliye wanaagsan,” ayay tiri Matilda.
“Markii aan kubiiray ciidanka ma ogeyn in haweenku ay duuliye noqon karan. Waxaan daawanayay haweeney bambooyiin keeneysa waxaana uheysatay in hawenka ciidanka ah aysan sidaa sameyn karin. Waxaan is dhahay, maxaad uga mid noqotay ciidanka. Waxay ila ahayd in illaa iyo hadda aan diyaarad uun mar baran doono,” ayay tiri.
Waxay qarisay da’deeda rasmiga ah ayado markaasna jirtay 16 sano waxay sheegtay inay jirtay 17 sano maadama qof kayar 17sano an ciidanka loo ogoleyn. “dhammanteen waan rabnay inan kubiirno marna marabin inay cidna nagabixiso”, ayay tiri.
“Waxay ahayd arrin aan caadi aheyn, waxaan u baahnayn in aan wax qabano, ” ayay tiri.
Sida ayeeyeeydeed, Matilda waxay leedahay rabitaan cunto oo xiiso leh. “Waa inaan si wadajir ah u shaqeysanaa, si uu midba midka kale u caawiyo oo aan xiriir wanaagsan u yeelano,” ayey tiri.
Horraantii toddobaadkan, ka hor casharka duulimaadka, Mollie iyo Matilda ayaa go’aansaday in ay tagaan wadada wadajirka ah ee Cotswolds, ee ku yaalla koonfurta England.